Ninkii lagu guurow waa gedaa in lagaa guuraa W/Q: Yasir Mohamoud Abdi | Cadceed newssite
Thursday, January 25th, 2018 | Posted by admin
Ninkii lagu guurow waa gedaa in lagaa guuraa W/Q: Yasir Mohamoud Abdi
Salaan iga gudooma akhristayaal, salaantaas kadib salaadiinteeni maxaa ku dhacay? miyay taladii cayn wareegtay oo caruur loo dhiibay !!!
somaalidu waxay hore suugan ugu sheegtay “ geela duqiisu durduriyo aarankiisana maxaad u malayn ?”
tirsiga ayaamaha aynu ku jirno misna odaygeedii caynkaa u dhaqmayo caruurteed maxaad u malayn!!!!
Intaas hadaan kaga soo gudbo araar, waayahan dambe waxaa baraha bulshada iyo warbaahintu isla dhex marayaan suldaan hebel iyo suldan hebel oo isugu jawaabay si aan anshax iyo akhlaaqad midna lahayn suldaanku miyaanu ahayn
Kii colaadaha bakhtiin jiray ee dadka kala celin jiray
Kii caqliga lahaa ee cumaamada lahaa
Kii haybada lahaa ee hablaha bixin jiray
Kii cisiga badnaa ee culimada la sinaa
Waa maxay suldaankan balaayada hor boodaya misna dadkii uu isu soo dhawayn lahaa kala qo-qobaya?
Xuska, xusuusta ama dib u eegista maalmihii la soo dhaafay ee daadihiyayaashii halganka iyo madax dhaqameedkii hibadu saarnayd hadii aynu tusaale usoo qaadano suldaan maxamed suladaan faarax suldaan mahad AHN waxa uu ahaa suldankii u horeeyay ee ku biira halgankii dulmi diidka ee SNM isaga oo waqtigaa qoriga u qaatay si uu dadkiisa uga saaro heeryada gumaysiga iyo cunsuriyada.
waxa uu ahaa suldaankii u horeeyay ee hub-ka dhigis ku sameeya beeshii uu hogaaminayay ee guutadii SANCAAWI 2_feb_1994, Alle ha u naxarisstee isaga iyo salaadiin badan oo taarikhda umadda baal ka galay kana qayb qaatay xasilinta iyo curinta nabad sal-balaadhan oo manta 75% dhalinyarada dhulkan ilahay ku beeray jamacado kaga baxeen kuna shaqaystaan nabad iyo gobanimo waxay mudan yihiin ku dayasho.
Is badalka ayaamaha iyo geedi socdka waqtiga ayaa go’aamiya boga nooluhu taariikhda ka galo, sidaan anigu qabo waqti xaadirkan waxay Somaliland u baahan tahay cid u Talisa una horseeda maamul wanaag iyo hiigsi ku dhisan aqoon iyo is af-garad balse uma baana nin u abtirsada ama u lab-garaacda.
waxaa la odhan jiray “ciroole dantiisa lagu waaniyay ka tag” haddana waxay noqnasaa “Suldaan sabigu waaniyay ka tag”.
Ugu dambayn waxaan dhambaal cod dheer u dirayaa dhamaan umadda reer Somaliland gaar ahaan dhalinyarada hadda uun mustaqbal bilaabaya “ waar hoy Ninkii lagu guurow waa gedaa in lagaa guuraaye” rajadiina ha ku waayina xamaasad iyo qiiro gaaban misna durbaanka u tumayo oday waqtigiisa qaatay.